“Guusha Xisbiga SDP Waa Guusha Somaliland” Safiirka Somaliland ee Finland | Hayaan News
“Guusha Xisbiga SDP Waa Guusha Somaliland” Safiirka Somaliland ee Finland
Helsinki (Hayaannews): Safiirka Somaliland u fadhiya dalka Finland Marwo Saamiya Xaaji Muuse, ayaa ka hadashay muhiimadda siyaasadeed ee Somaliland ugu jirta guusha uu xisbiga SDP ka gaadhay doorashadii baarlamaanka Midawga Yurub ee dhacday Axadii todobaadkan.
Saamiya Xaaji Muuse, oo xubin ka ah xisbiga SDP oo u wakiishay in ay ka mid noqoto muraaqibiintii xisbigaas uga qayb galay doorashaddii 26 May 2019 dalkaas ka qabsoontay ayaa si weyn u hambalyaysay Mr. Tero Heinäluoma, oo ku guulaystay doorashadi baarlamaanka Midawga Yurub.
Waxaanay sheegtay in Mr. Heinäluoma, uu diyaar u yahay in uu kala shaqeeyo taageeradda qadiyadda Somaliland, isla markaana markii lagu dhawaaqay guusha Mr. Heinäluoma, ay hambalyo u dirtay iyadoo ku hadlaysay magaca Somaliland.
Sida lagu sheegay war-murtiyeed ka soo baxay Safiirka Somaliland u fadhiya dalka Finland Marwo Saamiya Xaaji Muuse, waxaana lagu bilaabay sidan :- “Waxaa sharaf weyn noo ah in uu ku guulaystay doorashadi baarlamaanka Midawga Yurub Mr. Tero Heinäluoma, oo hore u ahaa goddoomiyaha baarlamaanka Finland, kuna guulaystay codka ugu badan dalka Finland. Iyadoo aan si dhaw ugala shaqeeyey ololihiisii doorashadda.
Markii guushaas lagu dhawaaqay ayaan si farxad leh ugu hambalyeeyay. Aniga oo ku hadlaya magaca Somaliland, isla markiibana ka dareen celiyay mahad naqaas, kuna dhawaaqay erayadaas.
Natiijadii maanta (doraad) waxay muhiim u tahay Europe iyo Somaliland oo aan la nahay saaxiib weyn. Somaliland oo ay inaga dhaxayso xidhiidh iskaashii oo aad u fiican muddo dheer. Waxaanu ku daray inuu u diyaar u yahay taageeradda halganka qadiyadda Somaliland”.
Marwo Saamiya, ayaa intaas ku dartay in ay habeen hore kulan la yeelatay Mr. Tero Shemeikka, iyo Mr. Luis Ayala, oo ah xoghayaha guud ee ururka caalamiga ah ee bulshooyinka.
“Waxaa sharaf weyn ii ahayd xalay (habeen hore) in aan kulan fiican wada qaadanay Mr. Tero Shemeikka, xoghayaha arrimaha caalamiga ah ee xisbiga SDP iyo Mr. Luis Ayala, oo ah xoghayaha guud ee ururka caalamiga ah ee bulshooyinka (The Secretary-General of the Socialist International Organization) oo ka soo qayb galay doorashaddii baarlamaanka Finland oo shalay (doraad) ka dhacday dalka Finland”.